Business Update: Filimka Kaabil Mudo 5-Todobaad Ah Ganacsiga Uu Gudaha Hindiya Ka Sameeyay - Hablaha Media Network
Business Update: Filimka Kaabil Mudo 5-Todobaad Ah Ganacsiga Uu Gudaha Hindiya Ka Sameeyay
HMN:- Super Star Hrithik Roshan filimkiisa Kaabil ayaa gabo gabo ku dhow inuu tiyaatarada gudaha Hindiya isaga dago wuxuuna sii sarnaan doonaa labada todobaad ee nagu soo fool leh asigoo lacago aad u yar keeni doono.
Sida shabakada Boxoffice India xaqiijisay filimka Kaabil qaybtiisa Af Hindiga lagu daawaday wuxuu soo xareeyay 86.50 Crore mudo 5-todobaad ah ayadoo kasoo xigatay kooxda cajaladaha qeybiyaan iyo kuwa tiyaatarada iska leh.
Kaabil saami ahaan kooxda cajaladaha qeybiyeen waxay ka heleen 41.50 Crore ayadoo xusid mudan inay filimkaan Rakesh Roshan kaga iibsadeen 50 Crore.
Sidaa darteed 8.50 Crore ayaa ka luntay ama ka qasaartay kooxda cajaladaha Kaabil qeybiyeen wuxuuna natiijo ahaan noqday Below Average.
Kaabil wuu ku fashilmay inuu filimka Raees la tartamo ama soo qabto madaama todobaadka kowaad siweyn looga lacag badiyay markii tiyaatarada la isla saaray wuxuuna loolankada kusoo idlaaday in Raees uu 42 Crore lacago ah dheeer yahay filimka Kaabil.
Kaabil ganacsi ahaan wuxuu la mid noqday filimkii Shivaay ee Ajay Devgn sameeyay kaasi oo Diwali 2016 tartan la galay filimkii Ae Dil Hai Mushkil balse laga guuleestay.
Shivaay cimri ahaantiisa wuxuu keenay 84.83 Crore (Trade Figure) waxaana saami ahaan laga helay 42.50 Crore sababta Kaabil looga saami batay asigoo lacagaha guud Shivaay ka badan waxay tahay in Shivaay todobaadkiisa kowaad lacago 63.47 Crore keenay halka Kaabil todobaadkiisa kowaad uu keenay 58.92 Crore.
Sidaa darteed filimkii todobaadka kowaad lacag badan ayay saami badan kooxda cajaladaha qeybiyaan ka helaan waayo todobaadka kowaad ayuu ganacsiga xoogan iyo saami qeebsashada.
Fadlan hoos kaga filimka Kaabil mudo 5-todobaad ah lacagaha uu keenay sida shabakada Boxoffice India soo daabacday:
Todobaadka kowaad – 65.74 Crore (mudo 9-maalmood)
Todobaadka labaad- 16.66 Crore
Todobaadka sedexaad- 3.54 Crore
Todobaadka afaraad- 45 Lakh
Todobaadka shanaad- 11 Lakh
Wadarta Guud – 86.50 Crore (Trade Figure) waa qaybtiisa Af Hindiga lagu daawaday
Kaabil qaybtiisa Af Tamil iyo Telugu lagu daawaday wuxuu kasoo xareeyay 3 Crore sidaa darteeed ganacsigiisa guud ee gudaha Hindiya waa 89.50 Crore (All India Business).